Lionel Messi Oo Kashifay Halka Xiddig Uu Waligiis Weydiistay Iney Maaliyadda Kala Badashaan - Waana Halyeey Real Madrid Ah. - Gool24.Net
Kabtanka Barcelona ayaa kashifay halka uu xiddig uu waligiis weydiistay iney maaliyadda kala badashaan, waxeyna aheyd wakhtiyadiisii ugu horreysay kubadda cagta heerka sare.
Xiddiga shanta jeer ku guuleystay abaalmarinta Ballon d’Or ayaa la weydiiyay su’aal ku saabsan hadii uu ciyaartoyda kasoo horjeeda ka badasho maaliyadda dhamaadka kulamada, balse wuxuu qiray inuusan laheyn dabeecadda sidaas ah.
32-jirkaan ayaa wareysi siiyay TyC Sports, wuxuuna qiray inuu waligiis hal xiddig weydiistay maaliyadiisa, waana mid ka mid ah halyeeyada soo maray Real Madrid, sidoo kalana waa tababaraha haatan ee kooxda boqortooyada kulan ka tirsan horyaalka La Liga.
Lionel Messi wuxuu qiray inuu si caadi ah ciyaartoyda kubadda cagta maaliyadda uga badasho, balse halka qof uu waligiis weydiistay uu yahay Zinedine Zidane.
“Ciyaartoyda ma weydiisto maaliyadaha, kaliya si caadi ah ayaan uga badashaa, balse Zidane ayaan halmar weydiistay” ayuu yiri Lionel Messi.
“Hadii uu jiro qof u dhashay Argentina waan kala badalaneynaa, balse hadii uusan qofna i weydiin, aniga qofna ma weydiisto” ayuu yiri xiddiga Barcelona.
Lionel Messi oo loo tixgeliyo mid ka mid ah mucjisooyinkii soo maray kubadda cagta ayaa ku jira wakhtiyadiisii ugu dambeeyay kubadda cagta, wuxuuna dib u dhigay inuu qandaraaska u kordhiyo Balaugrana, filashadu waxey tahay inuu waayahiisa Argentina kusoo dhameeyo.